लगातार वर्षाका कारण माडी क्षेत्र प्रभावित, अधिकाङस वडा डुवानको जोखिममा केहि वडाका वस्तीमा पानी पस्यो | PBM News.com
माडी २६ असार । लगातार वर्षाले माडीको केहि घर डुबानमा परेको छ । माडीको बनकटा, सेरूवा, गर्दी, बरुवा लगायतका ठाउँमा डुबानमा परेको हो । निरन्तर परेको वर्षासँगै खेतवारी र घरनजिकैको कुलोबाट आएको पानी घरभित्र पसेको हो । यसैगरी रिउँखोलामा पानीको बहाव बढ्दै गएको छ । गएरातिदेखि परेको पानीका कारण सिंगो माडी नगरपालिका प्रभावित बनेको छ ।
विशेषगरी नगर क्षेत्रको तल्लो तटिए क्षेत्रहरु बढी प्रभावित भएको छ । अधिकांश वडाहरु डुबानमा परेका छन् । माडीको पछिल्लो २४ घण्टाको विवरण अनुसार ११० मिलि लिटर पानी मापन गरिएको छ । बसन्तपुरमा रहेको मापन केन्द्रले वर्षा मापन गरेको हो । वडा नं. ९ का अध्यक्ष शिवहरि सुवेदीका अनुसार घाँघर खोलामा आएका बाढीले त्यहाँ लगाएको ९९ मिटर लामो ड्याममा क्षति पुगेको छ । ड्याममा लगाइएको ४० थान तारताली सहित ड्याम नै बगाएको छ । यस्तै वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष पुरन महतोका अनुसार रिउखोलामा आएको बाढीले सिमरा आउजाउ नै बन्द भएको छ । पानीको निकासमा समस्या हूँदा मलाही टोल डुबानमा परेको छ ।
पहिलाको जस्तो रिउखोला, मगोईखोला, रौतनि खोलामा लगाईएको तारजाली सहितको ड्यामले खोलाको बाढी बस्तिमा पस्ने अवस्था छैन । ड्याम फुट्योवा भत्कियो भने बस्तिमा बाढी पस्ने खतरा हुन्छ, हाल सम्म त्यो खतरा नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ । वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष बालकृष्ण सापकोटाका अनुृसार रिउखोलाले कटान गर्दै आएको त्रिवेणी धाममा रहेको गोलघर बगाएको छ । मन्दिर पनि जोखिममा रहेको जानकारी दिए । रिउ खोलाले चेपाङ बस्ति प्रभावित । स्थानीय कमल चेपाङ का अनुसार अहिले खोलाको पानी बस्ति सम्म आइपुगेको छैन तर लगातार पानी पर्नेक्रम जारी रह्यो भने बस्तिमा पानी पस्न सक्ने खतरा छ, खेतबारीको पानी बस्ति तिरैबाट निकासि गर्दा बस्ति सामान्य रूपमा प्रभावित भएको छ ।
यसैगरी वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद ढकालका अनुसार बढी जोखिममा रहेको बैराठ, पौवारी, भैरवपुरको तल्लो क्षेत्र र मगोईखोला तर्फ भैरबपुर, जिवनपुरमा एकाध ठाउमा डुवान बाहेक अबस्था सामान्य रहेको छ । यता वडा नं. १ मा पनि पानीले प्रभावित बनाएको छ । वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल अनुसार डाङ्ग्रे खोलामा आएको बाढीका कारण गर्दि,सेरुवा क्षेत्रका केही घर तथा खेत डुवानमा परेको छ । यसैगरी वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष रामबन्धु पोख्रे का अनुसार खेतको पानी निकासिमा समस्या हुदा ब्रह्मपुरीका केही बाटोहरू जलमग्न भएको छ । बाटोलाई सहज बनाउन पानी निकासिको काम भैरहेको छ । अहिले सम्मलाई अन्य अबस्था सामान्य छ । वडा नं.९ का वडा अध्यक्ष कृष्णराज अधिकारीका अनुसार यो वडामा पानीको निकासीमा समस्या हुँदा केही ठाउँहरू डुवानमा परेको छ ।
खोला तथा घोलमा आएको बाढीले आवतजावतमा समस्या छ । यता वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष भरत बहादुर गुरूङका अनुसार खेतबारीको पानी निकासिमा समस्या हुदा बसन्तपुरको २ घरमा सामान्य पानी पसेको छ । अन्य अबस्था सामान्य रहेको छ । माडीका सबै ठाडाँ खहरे खोलाहरू हुलाकि सडकमा पर्ने हुँदा, खोलाहरूमा आएको बाढीका कारण पुल नभएका ठाउँमा यातायात पूर्णरूपमा प्रभावित भएका छन् । मगोई खोला नजिक रहेको हाईटेन्सन लाईनको पोल लड्ने अवस्थामा रहेकाले विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिले सो स्थलमै पुगि मर्मतको तयारीमा रहेका छन् ।
रिउखोलामा जलसतह सतर्कतासम्म पुग्न सक्ने भएकाले माडी नगरपालिकाको तटीय क्षेत्रमा आज बिहान ९ बजेसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशका सबै प्रदेशभा वर्षा भइरहेको छ । चितवनमा विशेषगरी नारायणी, रिउ, राप्ती खोलाबाट बाढी आउने खतरा रहेको छ ।
चितवन प्रशासनले बाढी आउन सक्ने भएकाले सबैलाई सतर्क भएर बस्न आग्रह गरेको छ ।
भाग्यले ठगिएकी एउटी बालिकाको जीवन / खुट्टा दाम्लोले बाँधेर हेरचाह